निवर्तमान (Nibartaman) ||: मलाई भोट किन ?
मलाई भोट किन ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार
रुपन्देही क्षेत्र नं. २
पहिलो कुरा यो देशमा आएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि राजनीतिको गन्तव्य बदलिएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीले बदलिएको राजनीतिक गन्तव्यमा पुग्नका लागि आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगतिलाई नै मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाएर वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गरेको छ । र, म यहि विकास, समृद्धि र प्रगतिको एजेण्डा लिएर आम नागरिकको घरदैलोमा पुगेको छु । त्यसैले विकास, समृद्धि र प्रगतिको नयाँ गन्तव्यमा पुग्नका लागि र आम नागरिकको विद्यमान अवस्था बदल्नको लागि आम मतदाताले मलाई भोट दिने ।
दोस्रो बदलिएको राजनीतिक गन्तव्यसहितको बदलिएको राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि अबको नयाँ युवा पुस्ता अग्रसर हुनुपर्छ । किनकि अबको राजनीतिक कार्यभार युवा पुस्ताले मात्र पूरा गर्न सक्छ । र मैले त्यही युवा पुस्ताको नेतृत्व गरेको छु, त्यसैले मलाई भोट दिने । त्यस्तै म विसंगतिपूर्ण बन्दै गएको राजनीति सफा गर्न र असल राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नकै लागि राजनीतिको मैदानमा उत्रिएको छु, त्यसैले असल राजनीतिका लागि मलाई मत दिने ।
म आम नागरिकको घरदैलोमा पुगेर मत माग्दै गर्दा निकै उत्साहित भएको छु र रमाइलो पनि लागिरहेको छ । हामीले अब युवापुस्ताले राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ । यो देशलाई गरिबी र बेरोजगारीको चपेटोबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यो देशमा रोजगार सिर्जना गरी विदेशिन बाध्य युवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ । म यिनै मुद्दाहरु लिएर चुनावी अभियानमा छु र नागरिकबाट पनि हाम्रा मुद्दाहरुलाई सहर्ष स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले आम नागरिकले मलाई मत दिनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
बहसमा वैकल्पिक राजनीति - २ : विकल्पकाे आधारस्तम्भ
बहसमा वैकल्पिक राजनीति: विकल्प निर्माणको प्रश्न
अब युवा जागौं
कार्यकर्ता बन्ने कि नागरिक ?
'राजनीतिलाई सुधार्न' भन्दै चुनावमा उत्रिएका रुपन्द...
'नागरिक अाफ्ना दु:ख र समस्या हटेकाे हेर्न अाँतुर छ...